Cryptogames: သိရန်၊ ကစားရန်နှင့်အနိုင်ယူရန် DeFi လောကမှအသုံးဝင်သောဂိမ်းများ Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အားကစားပြိုင်ပွဲ, NOTICIAS
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားစရာစာရင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည် "Cryptogames" သို့မဟုတ်ကွင်းပြင်ကစားနည်းများ DeFi (Decentralized Finance)၊ ငါတို့သိပြီးသားအတိုင်းဘဲ၊ အဲဒါက နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ် open source ဖြစ်ပြီး ဘဏ္financialာရေးလောကတွင်မကြာသေးမီက blockchain နည်းပညာပတ် ၀ န်းကျင်၌ဖြစ်ပျက်နေသည်။
အ "Cryptogames" လောလောဆယ် fad ဒါမှမဟုတ် အိုင်တီလမ်းကြောင်း ၏နယ်ပယ်၌ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများသူတို့ပေးတာကအကြောင်းပြောစရာတွေအများကြီးပေးနေတယ် ငွေကြေးဆုလာဘ်များတွင် virtual ငွေကြေးများနှင့်တရားဝင် cryptocurrenciesထို့နောက်၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် တရားဝင်တင်ဒါ fiat ငွေ နိုင်ငံတိုင်း၏။ နေ့တိုင်းအကျိုးရှိသောစိတ်ဝင်စားစရာဂိမ်းသစ်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ ကစားရန်နှင့်ငွေရှာရန်ပေါ်လာသည်။
Axie Infinity: NFT ကိုအခြေခံသော DeFi World မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်အွန်လိုင်းဂိမ်း
ထို့ပြင်ဤစာစောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြည့်စွက်ရန်ကြိုးပမ်းသည် ယခင်ဆက်စပ် post နှင့် "Cryptogames"တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ခေါ်လိုက်သည် "Axie Infinity"ကျွန်ုပ်တို့အကျဉ်းအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါ -
"axie အဆုံးမရှိ ၎င်းသည် DeFi Open Ecosystem ၏ Online Game တစ်ခုဖြစ်သည် တိုက်ခိုက်ရန်၊ တည်ဆောက်ရန်နှင့်ဘဏ္treasureာကိုရှာဖွေရန်နှစ်သက်သောရက်စက်သောသတ္တဝါများဖြစ်သော Axies ။ ထို့အပြင် Axie Infinity တွင်ကစားသမားများသည် Axies များကို စုစည်း၍ ဂိမ်းများကိုအမြဲတိုးချဲ့နေသောစကြဝာတွင်သုံးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် Axie Infinity သည် Blockchain ဟုခေါ်သောနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ကစားသမားများအားသူတို့၏ပါဝင်မှုကိုဆုချသည်။" Axie Infinity: NFT ကိုအခြေခံသော DeFi World မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်အွန်လိုင်းဂိမ်း
1 Cryptogames: ကစားခြင်းမှအနိုင်ရခြင်းမှကစားခြင်းမှရရှိသည်
1.1 Cryptogames ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 ၂၀၂၁ အတွက်ထိပ်တန်း Cryptogames များ
အ "Cryptogames" သူတို့ကတစ် ဦး ဖြစ်ကြသည် ဗီဒီယိုဂိမ်းနယ်ပယ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ်သိပြီးသားအသုံးပြုခြင်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည် cryptocurrencyမရ။ လမ်းကြောင်းသစ်ကိုခြေရာခံနိုင်သည့်အစဟုခေါ်သောပလက်ဖောင်းပေါ်ပေါက်လာသည် CryptoKitties ပတ်ပတ်လည် 2017 တစ်နှစ်မရ။ အခြေခံအားဖြင့်aပါ ၀ င်သည် ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကြောင်များနှင့်စုဆောင်းနိုင်သောကဒ်ဂိမ်းမရ။ ၎င်းကို သုံး၍ ၀ ယ ်၍ လဲလှယ်ရမည် Ethereum ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး.
ထို့အပြင်မည်သည့်ပလက်ဖောင်း၌မဆိုကဲ့သို့အခြေခံသည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chainကစားသမားများ (သို့) အသုံးပြုသူများ "Cryptogames" သုံးရမယ် ပိုက်ဆံအိတ် ၎င်းမှ ၀ ယ်ယူ / လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန်လိုအပ်သော cryptocurrencies များကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်အကောင့်များ ကစားသမား / ဇာတ်ကောင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လိုအပ်သောဂိမ်း
ကိစ္စအများစုတွင်၊ ဒါတွေ ကစားသမား / ဇာတ်ကောင် game တစ်ခုသည်တစ်ခုထက်မပိုပါ NFT, IE, ထူးခြား။ ခိုင်လုံသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင် ၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့သည့်ပလက်ဖောင်းအတွင်း၌ ဒါ့အပြင်၊ ပေါ်မူတည် "Cryptogame" သူတို့တစ် ဦး စီ၏တန်ဖိုးများသည်ဒေါ်လာအနည်းငယ် မှစ၍ တက်နိုင်သည် ဒေါ်လာထောင်ချီတယ်.
ထို့ကြောင့်၎င်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်သည်။ "Cryptogames" အတွေးအခေါ်လုံးဝပြောင်းသွားပြီ အနိုင်ရရန်ကစားပါ တိုက်ပွဲများ (အနိုင်ရရန်ကစားပါ)aငွေရှာရန်ကစားပါ.
"Crypto ဂိမ်းများနှင့် NFT ဂိမ်းများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သည်၊ ယခင်သည်အခြားကစားသူများနှင့်အနိုင်ရရန် cryptocurrencies သုံးစွဲခြင်းကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်၊ NFT ဂိမ်းများသည်ကစားပွဲတွင်သုံးနိုင်သောထူးခြားသော NFTs များကိုထုတ်လုပ်ရန်စုဆောင်းရန်ဇာတိငွေကြေးများကို သုံး၍ အာရုံစိုက်သည်။ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်သိုလှောင်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။" ဂိမ်းတွေမှာ NFTs တွေကဘာတွေလဲ။ Blockchain ရှိ crypto ဂိမ်းစျေးကွက်
၂၀၂၁ အတွက်ထိပ်တန်း Cryptogames များ
များစွာရှိပါသည် "Cryptogames" လောလောဆယ်မှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲအသစ်တွေကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်။ သို့ရာတွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး၊ လူသိများသော၊ အကျိုးအမြတ်ရရှိသည့်အနက်အောက်ပါတို့ကိုအက္ခရာစဉ်အတိုင်းဖော်ပြနိုင်သည်။
ဂြိုလ်သား World - «https://es.alienworlds.io/»
axie အဆုံးမရှိ - «https://axieinfinity.com/»
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုစစ်တိုက်ပါ - «https://www.battlepets.finance/»
အမှောင်သစ်တော - «https://zkga.me/»
နဂါးရုပ် - «https://dragonary.com/es»
ဖာရာလန်း - «https://faraland.io/»
ဘုရား Unchained - «https://godsunchained.com/»
မိုး - «https://illuvium.io/»
အခိုးအငွေ့ - «https://mist.game/»
ကျွန်ုပ်၏ Crypto သူရဲကောင်းများ - «https://www.mycryptoheroes.net/»
ကျွန်ုပ်၏ DeFi Pet - «https://mydefipet.com/»
ငါ့အိမ်နီးချင်းအဲလစ် - «https://www.myneighboralice.com/»
နီယွန်ခရိုင် - «https://neondistrict.io/»
အပင်နှင့် Undead - «https://plantvsundead.com/»
နေပြည်တော် - «https://www.skyweaver.net/»
စနူကာ - «http://playsnook.com/»
သဲအိတ် - «https://www.sandbox.game/en/»
တိရစ္ဆာန်ရုံ - Crypto World - «https://zoogame.finance/»
ကြံကြံဖန်ဖန်ပြေးသည် - «https://play.google.com/store/apps/details?id=bitcoin.alien.run»
Bounce Bitcoin - «https://apps.apple.com/us/app/bitcoin-bounce/id1487339632»
တောင်ပေါ် - «https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upland.app»
Big အချိန် - «https://bigtime.gg/thegame»
Ember ဓား - «https://embersword.com/»
အုပ်ထိန်းသူများအစည်းအရုံး - «https://www.guildofguardians.com/»
အဆုံးမဲ့ရေယာဉ်စု - «https://www.infinitefleet.com/»
ရယူသည် ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤဖော်ပြထားသောဂိမ်းများနှင့်အခြားအကြောင်းများကိုသင်အောက်ပါကိုနှိပ်ပါ link ကိုမရ။ မည်သူမဆိုအခြားပျော်စရာကောင်းပြီးအကျိုးရှိသည်ကိုသိလျှင် "Cryptogame", အခြားသူများသိရန်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ကို comment တွင်ချန်ထားခဲ့ပါ။ အားလုံးထက်၊ အလုပ်လုပ်သောသူများ GNU / Linux များ သူ့ကိုထောက်ခံပါ စပိန်ဘာသာစကား.
တိုတိုပြောရရင်, "Cryptogames" များစွာသောသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည် အခမဲ့ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အချိန်ကိုငွေရှာပါမရ။ အထူးသဖြင့် ၀ င်ငွေနည်းနိုင်ငံများ (သို့) အတော်လေးဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသောစီးပွားရေးများနှင့်ထိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Cryptogames: သိရန်၊ ကစားရန်နှင့်အနိုင်ယူရန် DeFi လောကမှအသုံးဝင်သောဂိမ်းများ
Riseup: စိတ်ဝင်စားဖွယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲအတွက်လှုပ်ရှားမှု